သီတဂူဆရာတော်၏ “အလွတ်သဘော” ဆိုသည်ကို ဆန်းစစ်ကြည့်ခြင်း | MoeMaKa Burmese News & Media
တူမောင်ညို (၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်)
“အလွတ်သဘော” ဘုန်းကြီးက ပြောသည်ဆိုလျှင် “ဝိနည်းလွတ်” ပြောတာပဲဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ယူဆပါသည်။
ဤသို့ပြောဆိုမှုသည် ဒုဗ္ဘာသီအာပတ် (မကောင်းသောပြောဆိုမှုအဖြစ် လူအများ ကဲ့ရဲ့ဖွယ်အပြစ်) သင့်ပါလိမ့်မည်။
ဝိနည်းဓိုရ် ဘုန်းကြီးဆိုလျှင် “အလွတ်သဘော” ပြောလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ “၂၂၇ သွယ်သောဝိနည်း” ဟုဆိုထားပါသည်။ ဝိနည်းတရားတော်သည် သာသာနာ၏ အသက်ဖြစ်ပါသည်။ (ဝိနယော နာမ ဗုဒ္ဓသာသနဿ အာယု)
ထို့ကြောင့် “ဝိနည်းလွတ်” ဆိုသည်မှာ တကယ်တော့ ရဟန်းတော်များလိုက်နာရမည့် ဥပဒေကို လက်တစ်လုံးခြားချိုး ဖောက် ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။
တကယ်တော့“အလွတ်သဘော”ဆိုသည်မှာ လောကီကိစ္စ။ နိုင်ငံရေးစနည်းနာကြခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ပါတီနှင့်တစ်ပါတီ၊ တစ်ဖွဲ့ နှင့် တစ်ဖွဲ့ တရားဝင်ဆွေးနွေးပွဲမစခင်၊ အလျော့အတင်းမလုပ်ကြခင် အပြန်အလှန်ကြိုတင် တီးခေါက်ကြည့်ကြသည့် သဘောဖြစ်သည်။
ဘုန်းကြီး၏ “အလွတ်သဘောပြောဆိုမှု” သည် ကျောင်းတိုင်ခေါင်းထဲက “ဖွတ်” ကို စားချင်သော ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးမှ ကျောင်းသားများအား “ဝိနည်းလွတ်” မိန့်ကြားပုံမျိုးနှင့်ဆင်တူနေသည်။ ပုံပြင်ထဲကဘုန်းကြီးက “ဖွတ်သား”စားချင်တာဖြစ်သော် ယခု ကိုယ်တော်ကြီးကမူ “ကြံ့ဖွတ်သမ္မတ”ကို ဗြောင်အားပေးဖို့ သြဝါဒပေးနေတာဖြစ်သည်။ မဲဆွယ်နေတာဖြစ်သည်။
“ဟေ့ – ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးက၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေမပြင်ဘူး၊ ဒီအတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သမ္မတမဖြစ်နိုင် ဒါကြောင့် ဗိုလ်သိန်းစိန်ပဲဆက်လက်အားပေးကြ” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ဘုန်းကြီးသည် နိုင်ငံရေးကို ဤမျှစိတ်ဝင်စားနေပါလျှင် ကြံ့ဖွံ့ပါတီက အခြေခံဥပဒေမပြင်ခဲ့လျှင် “၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ” ပြင်ဆင်ရေးကြိုးပမ်းနေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အားပေးကြဟေ့လို့ အလွတ် သဘော အဘယ့်ကြောင့်ထည့်သွင်းမပြောခဲ့ပါသလဲ။ ပြင်ဆင်ရေးဘက်မှ ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ရှေ့ကမားမားရပ်ပြီး ပြင်ဆင်ကြဖို့ သြဝါဒ မပေးသင့်ပါလား။ အခုတော့ “သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ကို ဆက်လက်အားပေးသွားတာ ကောင်းတယ်” ပြောခဲ့သည်။ဆရာတော်၏ “အလွတ်သဘော” သည် ကြံ့ဖွံ့ပါတီ ဘက်ပင်းသော အလွတ်သဘောဖြစ်နေသည်။
ထို့အပြင်သီတဂူဆရာတော်သည် ကြံ့ဖွံ့ပါတီကိုအားပေးရာ၌ “ဒကာဗိုလ်ရွှေမန်းဂိုဏ်း” ထက် “ဒကာဗိုလ်သိန်းစိန်ဂိုဏ်း” ဘက် ပိုညွတ်နေတာပေါ်လွင်ထင်ရှားသည်။
“ရခိုင်ကိုယ်တော်တစ်ပါးက ခံစားချက်နှင့်အသုံးချသွားတာ” ဟု မိန့်ကြားသည်ကလည်း လူမျိုးရေးဆန်လွန်းပြီး တမင်လွှဲချ သလိုဖြစ်နေပါသည်။ သီတဂူကိုယ်တော်ကြီးပြောသည့်စကားကို ပြန်လည် ပဲ့ထင်ထပ်သည့်ကိုယ်တော်မှာ သာမင်ညောင်ညကိုယ်တော် မဟုတ်ပါ။ တိပိဋကကိုယ်တော်တစ်ပါးဖြစ်ပါသည်။
သီတဂူကိုယ်တော်ကြီးသာ အလွတ်သဘောဝိုင်းထိုင်ပြီး “အလွတ်စကား” မမိန့်ကြားခဲ့သော် ဤကိစ္စပေါ်လာစရာ အကြောင်း လုံးဝမရှိပါ။ မီးမရှိဘဲ၊မီးခိုး မထွက်နိုင်သကဲ့သို့ပင်။ ယခုတော့ ငါးမျှားနေသည့်ကိုယ်တော်ကို အခြားကိုယ်တော်တစ်ပါးက တီးတူးရင်း တွေ့ကြပုံမျိုးဖြစ်နေသည်။ ဤအချက်က ဘုန်းကြီးထိပ်သီးများကြားထဲ၌ ကြံ့ဖွံ့နိုင်ငံရေးစိမ့်ဝင်နေမှုကို အထင်အရှားဖော်ပြနေသည်။
သမ္မတနှင့်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ တွဲပြီး ဘုန်းကြီးလော်ဘီခရီးတွေ ထွက်သလို၊ ကာချုပ်ကလည်း ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ နီးကပ်ပြနေသည်။
စင်စစ် ယနေ့ဖြစ်ပွားနေသော ဘာသာရေး/လူမျိုးရေး အကြမ်းဖက်မှုများကို အဓိကကြိုးကိုင်စီမံဖန်တီးနေသူမှာ သမ္မတ ဗိုလ် သိန်းစိန်ကြံ့ဖွံ့အစိုးရဖြစ်ပါသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်က “ရာဇဝတ်မှုမီးပွား”ကို “ဘာသာရေး/လူမျိုးရေး အကြမ်းဖက်မှုတောမီးကြီး” ဖြစ်လာ အောင် ဆီလောင်းမီးရှို့ပေးခဲ့သူလည်းဖြစ်သည်။ သို့ဖြင့် “ဘာသာရေး/လူမျိုးရေး အကြမ်းဖက်မှုတောမီးကြီး” ကို ရှမ်းပြည်နယ် (လားရှိုး)၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး(မိတ္တီလာ)၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး(ထန်းကုန်း)တို့တွင် အရှိန်ကောင်းကောင်း၊ အချိတ်အဆက်မိမိ၊ ဆက်လက် ခုန်ကူး လောင်ကျွမ်းစေခဲ့သည်။
စိတ်ကြိုက် သေကျေလောင်ကျွမ်းပြီးကာမှ လက်ပိုက်ကြည့်နေသော အာဏာပိုင်များသည် စတိသဘောအရေးယူ ဆောင်ရွက် မှုအချို့ကိုပြခဲ့ကြသည်။ “ဆီးဂိမ်း” တွင် ထိုင်ခုံဖျက်ဆီး၊ အလံမီးရှို့သည့် “ဘောလုံးမျိုးချစ်များ”ကိုပင် ခရီးစရိတ်ပေးပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည့် အထိ မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်ထက်သန်မှုကို အထင်အရှားပြသခဲ့သည် မဟုတ်ပါလော။
ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေးအတွက် ခုတုံးလုပ်အသုံးမချသင့်။ သို့သော်လည်း အုပ်စိုးသူအဆက်ဆက်သည် ခုတုံးလုပ် အသုံးချမြဲ အသုံးချခဲ့ကြသည်။ အသုံးချနေဆဲဖြစ်သည်။
ထိုသို့အသုံးချခဲ့သူများအနက်တွင်ပို၍လက်စောင်းထက်မှာဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးနုဖြစ်သည်။ သူ့ကိုယ်သူ ဒီမိုကရေစီသမားကြီး ပါဟု တွင်တွင်ဝါဒဖြန့်သူ ဦးနုသည် ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေးအတွက် ဘာသာရေးကို ခုတုံးလုပ် အသုံးချခဲ့ပြီး၊ သူ့ပါတီအနိုင်ရရှိရေး အတွက်လည်း “နိုင်ငံတော်ဘာသာ” ဖြင့်တိုင်းရင်းသား သွေးစည်းညီညွတ်မှုကို ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းစစ်မီးကို ပို၍အရှိန် ကောင်းအောင်ဖန်တီးခဲ့သူဖြစ်သည်။
ယနေ့ဖြစ်ပေါ်နေသော ဘာသာရေးခုတုံးလုပ်နေမှု၊ လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှု လှုံ့ဆော်နေမှုများကို သမ္မတဗိုလ်သန်းစိန်အစိုးရက လက်ပိုက်ကြည်နေခဲ့သလို၊ (မဟန) အဖွဲ့ကြီးက လည်း ထိထိရောက်ရောက် ဟန့်တားမှုမပြုဘဲ ဝစီပိတ်နေတော်မူခဲ့သည် သို့မဟုတ် ဝစီပိတ်နေရန်ညွန်ကြားခြင်းခံနေခဲ့ရပုံပေါ်ပါသည်။
ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့က မန္တလေးမြို့၌ကျင်းပသည့် အမျိုးဘာသာ သာသနာ စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ (အထက်မြန်မာပြည် – မန္တလေး) ညီလာခံတွင် တက်ရောက်သော သံဃာသုံးသောင်းကျော်ဆိုသည်မှာလည်း နုနယ်ငယ်ရွယ်လှသည့် သံဃာငယ်များသာ အများစု ဖြစ်နေပါသည်။ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကလည်း အစိုးရကြိုက်ချည်းဖြစ်နေသည့်အချက်ကလည်း မေးခွန်းထုတ် စဉ်းစား စရာ ဖြစ်ပါသည်။ သီတဂူဆရာတော်သည် ထိုပွဲတွင် “အလွတ်သဘော” ပြောသင့်ပါ၏လော။ မေးခွန်းထုတ်စရာ၊ စဉ်းစားစရာပင်။
ကြံ့ဖွံ့အစိုးရသည် တိပိဋကဘုန်းတော်ကြီးအချို့ကိုပင် လူမျိုးရေးဘာသာရေးအတွက် ခုတုံးလုပ် အသုံးချနေသည့်အချက်မှာ ကွက်ကွက် ကွင်းကွင်းပေါ်လွင်နေပါသည်။
လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ဘာသာပေါင်းစုံပြည်သူများ အထူးသတိရှိကြပါ။ ထေကြီးဝါကြီးဆရာတော်ကြီးများကလည်း မျက်နှာတော် မလွှဲဘဲ၊ ထိုက်သင့်သလို အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးပါရန် လျှောက်ထားတောင်းပန်အပ်ပါသည်။
– သီတဂူဆရာတော် မှ (RFA) သို့ မိန့်ကြားချက် (၁၇-၁-၂၀၁၄)
– Photo – Irrawaddy Online
6 Responses to သီတဂူဆရာတော်၏ “အလွတ်သဘော” ဆိုသည်ကို ဆန်းစစ်ကြည့်ခြင်း
myint oo kyine on January 20, 2014 at 12:07 pm
minko on January 20, 2014 at 12:56 pm
မလွယ်လှဘူး တူမောင်ညို- ရေ- ဘုန်းကြီးလောကလဲ သူတို့ ဖျက်ဆီးထားလို့ပျက်စီးနေပြီ- မန္တလေး သံဃာ အစည်းအဝေးပြီး ကိုယ်နဲ့ဆက်စပ်တဲ့ ရဟန်းငယ်တွေကို တီးခေါက်ကြည့်တော့ သူတို့ ခမြာ ၀ါဒမှီုင်းဝနေကြပြီ- အလေးအနက်ထားမတွေးခေါ်နိုင်ကြဘူး- ကိုယ်မေးကြည့်တဲ့ ကိုယ်တော်က မသွားဖြစ်လိုက်ဘူးပြောတယ်- ဒါဖြင့် မင်း သဘောက ဘာလဲဆိုတော့ ထောက်ခံသတဲ့- ဘာကြောင့်လဲမေးတော့ အမျိုးဘာသာ သာသနာရေးမို့ တဲ့- သာသနာထွန်းကားခြင်တဲ့စိတ်ရှိရင် ဘုရားဟောထားတာ ရှိသားဘဲကွ- အဲဒီအတိုင်းလိုက်နာကြပါလား- သာသနာဖျက်မှာ အပြင်လူ မဟုတ်ဘူး- အတွင်းလူ သာသနာဝန်ထမ်းတွေက ၀ိနည်းမရိုသေ ဓမ္မမရိုသေနဲ့ဖြစ်ခြင်သလိုဖြစ်နေတော့ သာသနာပျက်မှာဘဲ- ကနောင်မင်းသားကြီး ရေမြှပ်ဗုံးတွေ တည်ထွင်တာကို နိုင်ငံလုံခြုံရေး နားမလည်ဘဲ မလုပ်ဘို့ပြောတာ ဘုန်းကြီးတွေ- အင်္ဂလိပ်က ကျွန်ပြုလို့မျိုးချစ်တွေ ရ ရာလက်နက်စွဲကိုင် သူပုန်ထတော့ ရွှေပြည်အေး တရားဟောတာ ဘုန်းကြီးတွေ- မှတ်ထားကွ နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာ ဘုန်းကြီးကို လိုတဲ့အခါ အသုံးချဘို့ကိုးကွယ်တာ- ကြည်ညိုလို့ကိုးကွယ်တာ မဟုတ်ဘူး- ဘယ်သူ အာဏာရရ- ဘုန်းကြီးဟာ သပိတ်ပိုက်ဆွမ်းခံစားရမှာဘဲ- ကိုယ်နားမလည်နိုင်တဲ့ မာယာ ပရိယာယ်တွေကြွယ်လှတဲ့ နိုင်ငံရေး ၀ဲဂယက်ထဲမှာ ချာချာ မလည်ဘို့အရေးကြီးသကွာ-လို့ ပြောလိုက်ရတယ်။
catwoman on January 20, 2014 at 9:46 pm
sometimes it s hard because monks have to depend on money and donors/sponsors to finish their projects. so may be he didnt really mean it but he probably didnt want to createabad relationship with whoever s in power.
Pro Nek on January 22, 2014 at 12:15 am
I strongly agree with saya daw.
Thet Naing on January 22, 2014 at 9:26 pm
ဟုတ်တယ်ဗျို့။ RFA နဲ့အင်တာဗျူးမှာ မေးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကိုတော့ ဆင်ဝှေ့ရန်ရှောင်ပြီး political standpoint ကနေမပြောဘူးဆိုပြီး ပြောသွားတယ်။ ဒါဆို စောစောကပြောခဲ့တာတွေက ဘယ်standpointကနေ ပြောတာလဲမသိဘူး။ တော်တော်တော့ ခက်နေကုန်ပြီဗျို့။ တဆက်တည်းပြောရရင် မိတ္ထီလာအရေးအခင်း လောက်ကစပြီး လူ့အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုသမားတွေပါ ချာချာလည်ထွက်သွားကြတာတော့ ရင်နာတယ်ဗျာ။ အဲဒီလိုမျိုးနောက်ထပ်ဖြစ်ရင် အဲဒီလူတွေဟာ စစ်အုပ်စုကို ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို မပြင်ဘဲ အဘတို့သာ ဆက်အုပ်ချုပ်ပါတော့ လို့တောင် ပြောမှာပူရသေးသဗျ။
cyrus on January 23, 2014 at 2:21 am
I read most of your articles. your thoughts are very practical and meaningful. your points of view on certain events are really pragmatic. Keep it up. I wish other medias should mention or share your articles to their webpages or blogs.